“အွန်လိုင်းစာပေလောက” မှ “အနုပညာစာပေလောက”သို့... ~ White Angel
“အွန်လိုင်းစာပေလောက” မှ “အနုပညာစာပေလောက”သို့...
3:52 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး7comments
Computer ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမှန်းမသိ၊ Email လိပ်စာကျမမှာမရှိ၊ G-Talk ဆိုတာဘာမှန်းမသိ၊ အသုံးပြုဖို့ဆိုတာ ဟိုးအဝေးကြီးမှာ။ကျမရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ On line တက်တယ်တဲ့။ Chatting ထိုင်တယ်တဲ့။ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိခဲ့၊ တုံးလိုက်တဲ့ကျမ။ အလုပ်တွေကိုပဲ အဆက်မပြတ်လုပ်နေတတ်တဲ့ကျမဟာ On line တက်သူတွေကိုကျိတ်ပြီးရီခဲ့ဖူးတယ်၊အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောပြီး အချိန်ကုန်၊ငွေကုန်တဲ့အလုပ်လို့သူငယ်ချင်းတွေကိုပြောခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီစကားကို အခုအချိန်က"စ"ပြီးပြန်ရုတ်သိမ်းပါတယ်။
ကျမComputer ကို"စ"ပြီးသုံးတတ်ခဲ့တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့(၂)နှစ်လောက်ကပါ။
ကျမရဲ့အခန်းဘေးက တရုတ်မလေးတယောက် တရုတ်ပြည်ကိုအပြီးပြန်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့Internet line ကို ကျမလက်လွှဲယူခဲ့တဲ့အချိန်က "စ"ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့ On line ကလာတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုကြည့်ဖို့သက်သက်ပါ။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကူညီနဲ့Email Account တခုဖွင့်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Mail တွေပို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တနေ့ ကျမဆီကိုရောက်လာတဲ့ Mail တွေထဲကမှ "VZO Chat" လို့ခေါ်တဲ့ Chatting Invitation တခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ရာမှ On line chatting ပေါ်ကိုကျမရောက်လာခဲ့တယ်။
ညဘက်အလုပ်ကပြန်လာရင် VZO က Video call မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရင်း Connection ကြောင့် သူငယ်ချင်းနဲ့လိုင်းပြတ်သွားတဲ့ တဒင်္ဂမှာ ဘယ်ကဝင်လာမှန်းမသိတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ပြကွက်ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်တော်တော်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒီတုန်းက Computer အသုံးပြုပုံကို မသိသေးတဲ့အတွက် Video Call ကို Auto Accept လုပ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့။ မောင်နှမသားချင်း ကြည့်လို့မြင်လို့မှမသင့်တော်တဲ့ အလွန်ယုတ်ညံ့တဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ရွံရှာမိရင်း VZO ရဲ့BLOG မှာ "Shyne to say I am Myanmar" ဆိုတဲ့Post လေးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် မတတ်တခေါက်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
နောက်တနေ့မှာတော့ ကျမရေးထားတဲ့ Post ရဲ့အောက်မှာ Comment လေးတွေတန်းစီနေတာကိုတွေ့တော့ ပျော်လိုက်ရတာ၊ အဲဒီမှာတင် စာရေးတဲ့ပိုးဟာ ကျမကိုယ်ထဲကိုရောက်လာရင်း အမြင်ကျဉ်းခဲ့တဲ့ကျမ၊ ဗဟုသုတနည်းခဲ့တဲ့ကျမ၊ စာဖတ်ပျင်းတဲ့ကျမဟာ ကိုယ်သိသလောက်၊ ကိုယ်လိုသူလိုသူငယ်ချင်းတွေကို သိစေချင်လာတယ်။
ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်က အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေကို ရေးရင်း သူများတွေနဲ့အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေမှတဆင့် ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ စာအတိုအထွာလေးတွေကို တစုတစည်းထဲစုထားချင်တာကြောင့် http://seaandangel.blogspot.com/ ဆိုတဲ့ အိမ်လေးတလုံးကို ဆောက်ဖြစ်ရင်း အွန်လိုင်းစာပေလောကထဲကို ခြေချမိတယ်ဆိုရင်ပဲ၊အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ စာပေ၊ရသစုံလင်တဲ့ Blogspot ဆိုတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးထဲကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး၊ ခံစားချက်၊ ကဗျာ၊ဟာသ ကျန်းမာရေး၊ဘာသာရေး၊ပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရေးနည်းအစုံအလင်နဲ့ အွန်လိုင်းစာပေလောကထဲက မောင်နှမတွေရဲ့ အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးထဲကို ကျမရောက်ရှိခဲ့တာ သိပ်နောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ အဲဒီပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ ပန်းပျိုးသူတွေရှိသလို၊ ပန်းဖျက်သူလည်းရှိတာပေါ့နော်။ ဒါကလည်း "ဆယ်သိန်းမှာတယောက်ပါ"(One inamellion)။ ကျမအတွက်ကတော့ အွန်လိုင်းစာပေလောကကို သိပ်မကျွမ်းကျင်တာကတကြောင်း၊ ရင်ဘတ်ကြီးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်းစာပေလောကအကြောင်းကလည်း ပြည့်စုံသလောက်ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျမကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ အနုပညာရပ်ဝန်းက စာနယ်ဇင်းအကြောင်းကိုပဲ လွှဲပြီး ပြောလိုက်ပါရစေ။ စာနယ်ဇင်းအတတ်ပညာကတော့ စာဖတ်သူတွေရဲ့စိတ်ကို ဖတ်ချင်လာအောင်စွဲဆောင်ခြင်း၊ လူအများစိတ်ဝင်စားနိုင်မည့်အကြောင်းအရာတွေကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ရှာကျန်ရေးသားခြင်း၊ သူတို့ရေးသောအကြောင်းအရာထဲမှ ကာရကံရှင်တို့ရဲ့စိတ်ကို နိုးထလာအောင်"စွ"ပေးခြင်း၊ ကြော်ငြာမည့်ကုန်ပစ္စည်းပေါက်အောင်(ရောင်းထွက်အောင်)"ဖွ"ပေးခြင်း၊ ...နည်းပညာတွေပါပဲ။ ကျမကိုယ်တိုင်ကို အဲဒီစာနယ်ဇင်းတွေရဲ့"ဖွ"နည်း"စွ"နည်းအတတ်ပညာထဲမှာ မျောပါခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကပေါ့။ကျမရဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတဲ့ ...ဒါရိုက်တာသီဟတင်သန်းရိုက်ကူးပြီး သရုပ်ဆောင်(ကို)ရာဇာနေဝင်း၊ ခိုင်သင်းကြည်နှင့်ပုလဲဝင်းတို့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်သော "အလွမ်းမဲ့ကာရံ"ဆိုတဲ့ DVD ဇာတ်ကားမှ ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတခုပါ။ ဇာတ်ကား"စ"မရိုက်မီအချိန်မှာ ဒါရိုက်တာနှင့်ကျမတို့သဘောတူညီမှုတခုရယူခဲ့ရာမှာ ဤဇာတ်ကား၏ကုန်ကျစရိတ်(စ-ဆုံး) အတွက် ဈေးသတ်မှတ်ပြီး ဒါရိုက်တာကိုသီဟအား အလုပ်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကား"စ"ရိုက်ချိန်မှ လက်ထဲသို့ခွေချောအပ်ချိန်အတွင်း သတ်မှတ်ငွေကို (၃)ရစ်ခွဲဝေပေးရန်၊ ဒါရိုက်တာမှသတ်မှတ်ထားသောငွေထက်ပိုသုံးစွဲမိပါက ဒါရိုက်တာ၏တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း၊ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးပြီးချိန်တွင် ငွေပိုများကျန်ရှိနေပါက ဒါရိုက်တာနှင့်သာသက်ဆိုင်ပါကြောင်း နှုတ်ကတိထားပြီး ဇာတ်ကား"စ"တင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ကျမဘက်က ကတိအတိုင်းငွေကိုခွဲချေပေးရင်း ခွေချောအပ်ချိန်တွင် ဒါရိုက်တာဘက်မှသိန်းဂဏန်းဖြင့် ငွေအနည်းငယ်စိုက်ထားရကြောင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့်ငွေထက်ပိုစောင်းပေးရန် တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ နှုတ်ကတိသာထားခဲ့သည့်ကျမအတွက် တရားဝင်ပြစရာ (စာချုပ်)ဘာအထောက်အထားမှမရှိခဲ့ပါ။ ကျမကုမ္ပဏီမှငွေကြွေးကျန်ရှိနေသည့်အကြောင်း ငွေအကျေချေပြီးမှသာ ခွေအပ်နိုင်မည့်အကြောင်း စာစောင်များမှာပြန့်သွားခဲ့တယ်။ ကျမကပြန်ဖြေရှင်းလိုက်။ သူကပြန်ဖြေရှင်းလိုက်နဲ့ စာနယ်ဇင်းဆရာတွေတော်တော်ကိုအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမနှင့်စာနယ်ဇင်းဆရာများ အင်တာဗျူးလုပ်စဉ်မှာလည်း ကျမမခံချင်အောင် (သူ့ဘက်မှာလည်းထိုနည်း၎င်းပေါ့)သွေးဆူအောင်လုပ်ရင်း နာမည်ကြီးဂျာနယ်နှစ်ခု ကျမနှင့်ကိုသီဟတို့ကိုယ်စားရန်ဖြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ တရက်မှာတော့ ကာရကံရှင်နှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်း စကားပြောမိရာမှ အဖွခံ၊အစွခံရမှန်းသိခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့အလုပ်ဆက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းဆရာများကိုလည်း အပြစ်မပြောလိုပါ။ သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေသည်ပဲ။ ကျမဘက်ကကျေးဇူးတောင်တင်ရပါအုံးမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဂျာနယ်စာစောင်တွေရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှ(၂)လကြာရန်ပွဲကြောင့် ပရိတ်သတ်များစိတ်ဝင်စားလာပြီး နယ်ကိုယ်စားလှယ်များအဝယ်လိုက်၍ ကျမဖြန့်ချီသော "အလွမ်းမဲ့ကာရံ" DVD ဇာတ်ကားမှာ အပေါက်ကြီးပေါက်၍အမြတ်ကြီးမြတ်ခဲ့သောကြောင့်ပင်။အဲဒီအချိန်ကျမှ ကျမတို့အတွက်ရန်ဖြစ်ပေးခဲ့ကြသာ ဂျာနယ်ကြီးနှစ်ခုမှာ ပြုံးစိစိလုပ်ရင်းကျမကိုပြောလိုက်တာကတော့.."ငါတို့တာဝန်ကျေပြီနော်"..တဲ့။ ပညာပါတဲ့သူတို့ရဲ့လှည့်ကွက်ကို အဲဒီတော့မှကျမသဘောပေါက်ခဲ့ရတယ်။ အထက်ပါအကြောင်းအရာများသည် ကျမပြောပြချင်သည့် အနုပညာလောကမှ "စာနယ်ဇင်းလောကအကြောင်း"ပဲဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဤဇာတ်ကားသည် (ကို)ရာဇာနှင့်ပုလဲဝင်းတို့ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးလိုက်သောဇာတ်ကားဖြစ်သည့်အတွက် အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
ကျေးဇူးတင်လွှာ။ ။ ဤဇာတ်ကားပေါက်အောင် "ဖွ"ပေးခဲ့ကြသော အလင်းတန်းဂျာနယ်နှင့်အချစ်ဂျာနယ်တို့မှတာဝန်ရှိသူများအားလုံးကို အစဉ်ဂါရဝပြုလျှက်။
(ဆက်လက်၍စိတ်ဝင်စားသေးပါက ကျမအရင်ကရေးခဲ့သော "ထုတ်လုပ်သူတဦး၏VIDEOဇာတ်ကားဖြန့်ချီပုံနှင့် ဖွနည်း အတတ်ပညာ"ကိုသိမှတ်ဖွယ်ရာနေရာတွင် ပြန်လည်ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်ရှင့်)။
အွန်လိုင်းစာပေလောကလေးကို ဖတ်ရင်း...အနုပညာစာပေလောကရဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်စရာလေးတွေကို သိရလို့ ကျေးဇူးပါဗျ...။
(နတ်သမီးရေ...ခေါင်းစဉ်က အနုပညာမှာ...ပစောက် ကျန်ခဲ့သလားလို့ဗျ...။ မှားသွားရင် တောင်းပန်ပါ၏။)
ဒီလိုဆိုတော့ ကျနော်လည်းကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် ဖွရမလို ဖြစ်နေတယ်...
စေတနာအရင်းခံနဲ့ ကူညီသူများကိုတော့ မပြောလိုပါ...
အဲဒီလ ဂျာနယ်တွေလည်း အတော်လေးကို ရောင်းကောင်းခဲ့မယ်ဆိုတာ အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ်...
တကယ်ပါဘဲ အမရေ ခုမှဘဲ ကောင်းကောင်း
သဘောပေါက်သွားတော့ ဂျာနယ်နဲ့သဘောတရား
တွေကို အနည်းငယ်တော့ သဘောပေါက်သွားတယ်
လေ ပို နာမည်ကြီးလေ ပိုပေါက်လေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်
စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး သုံးသပ်ကြည့်တာပါ . . . ကိုယ်
မသိတဲ့ နယ်ပယ်ကဗဟုသုတလေးတွေဖတ်ရလို့ ကျေး
ဇူးပါအမရေ . . .
အခုမှ စာစောင်တွေမှာ မင်းသားမင်းသီး(သရုပ်ဆောင်)
တွေ ဒါရိုက်တာတွေ အကြောင်းပါနေဖတ်နေရတာဂလို
ဒီ site လေးထဲကို အမှတ်မထင်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့
မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ blog လေးတစ်ခုပါ။
လဲသိခဲ့ရတယ်။ အေးချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ မ။။